July 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Jul 31, 2016 0
Rasaas ka dhacday gobolka Texas oo dad ay ku dhinteen.
Axmad	 Jul 31, 2016 0
Sida ay sheegeen Booliiska gobolka Texas ee dalka Maraykanka qof hubeysan ayaa Rasaas ooda uga qaaday dad marayay bartamaha magaalada Osten oo ah caasimadda gobolkaas, waxaana jira khasaare dhimasho oo gaaray dadka goobta ku sugnaa.…
Xildhibaano Dhaliilsan habka soo xulista Baarlamanka cusub.
Xildhibanada waqtigu ka sii dhamaanayo waxay dhaliilsan yihiin habka soo xulista baarlamaanka cusub ee ay ku howlan yihiin waxa loogu yeeray madasha wada tashiga ee ka kooban madaxtooyada, gudoonka baarlamaanka ra’iisalwasaaraha iyo madaxda…
Dil iyo dagaal ka kala dhacay Muqdisho iyo Dulleedka Afgooye.
Taliyihii baliiska degmada galcad ee gobalka galgaduud ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay deegaanka sanca ee magaalada muqdisho. Cali caddow oo Muddo dheer ka tirsanaa baliiska federaalka rag hubeysan ayaa dilka loo geystay fuliyay…
Maxaa lagu Micney karaa warka Kenya ee ah in dhaqaale gelinta ciidamada shisheeye nabada gobalku ku…
Dowladda Kenya ayaa xarunta waxa loogu yeero qaramada midoobay ka sheegtay in loo baahan yahay in midowga yurub soo celiyo dhaqaalihii uu ka jaray ciidamada shisheeye ee soomaaliya jooga in kastoo dhaqaalahaas laga jaray boqolkiba labaatan…
Dhageyso:Horumar ka jira degaanka araboow ee gobalka jubada dhexe.
Horumar dhanka gancsiga iyo nabad gelyada la xariira ayaa ka jira deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta alshabaab. Deegaanka araboow oo ka tirsan degmada Buu’aale ee gobalka jubada dhexe bulshada ku noolu waxay tilmaamayaan inay…
Warka Subax waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka subax 31 07 2016.
Ciidamo Aala-Sucuud ah oo lagu laayay xuduud beenaadka Xarameynka iyo Yaman.
Wararka ka imaanaya dalka Yaman waxay ku waramayaan in dagaallo xoogan ay ku dhexmareen maleeshiyaadka Xuuthiyiinta iyo ciidamada maamulka Aal-Sucuud deegaanno dhaca xuduud beenaadka labada dal. Sida ay baahiyeen warbaahinta…
Axmad	 Jul 30, 2016 0
Dhuuxa Wareysiyada idaacada Alfurqaan oo caawa lagu soo qaatay qadiyad xasaasi ah ka dhageyso qeybta Hoose. Halkan ka dhagayso Dhuuxa wareysiyada 30 07 2016
guuleed	 Jul 30, 2016 0
Warka Duhur waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhur 30 07 2016.